गच्छदारलाई किन रोक्यो सोह्रश्राद्धले ? | सहारा टाइम्स
Home » Politics » गच्छदारलाई किन रोक्यो सोह्रश्राद्धले ?
गच्छदारलाई किन रोक्यो सोह्रश्राद्धले ?
राजनीतिक जीवनमा विजयकुमार गच्छदारलाई अहिले जस्तो अप्ठ्यरो कहिले परेको थिएन । अहिले उहाँका लागि नखाउ भने दिनभरिको शिकार खाउ भने कान्छाबाबुको अनुहार जस्तो भएको छ .
चलिसकेको पार्टीलाई नेपाली काँग्रेसमा मिसाउनु भयो तर अहिलेसम्म काँग्रेसमा सो पार्टीको कुनै अस्तित्व छैन ।
नामले मात्र पार्टी एकीकरण भएको छ । सबै अंगहरुमा समायोजन हुन बाँकी नै छ । पार्टी एकीकरण भएको झण्डै एकवर्ष भयो तर गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम नेपालाई काँग्रेसमा समायोजन नगर्दा उहाँका साथमा रहेका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरु समेत साथ छाड्न थालेका छन् ।
एकातिर काँग्रेसमा पार्टीलाई समायोजना गरिरहेको छैन भने अर्कोतिर त्यहाँबाट फर्केर पुन लोकतान्त्रिक फोरम चलाए भने कार्यकर्ता र नेता छैन । एक वर्षदेखि काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आज भोली, आज भोली गर्दा गर्दै गच्छदकारलाई विच्चलि बनाएका छन् । तर समायोजन गर्ने त्यो दिन अझै आएको छैन । एकीकारण गरेपछि प्रतिनिधिसभा चुनाव टिकट पाएर निर्वाचनमा भाग लिनु भएका गच्छदार झिनोमतले चुनाव जित्नुभयो । चुनाव जितेपछि उहाँलाई संसदीय दलको उपनेताको जिम्मेवारी दिएको छ । तर, पार्टीमा अझै कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन ।
जब कि एकीकरण हुँदा उहाँलाई पार्टीको उपसभापति बनाउने सहमति भएको थियो । तर, अहिले उहाँलाई संसदीय दलको उपनेताको पद दिएर पार्टीमा अल्झाई रहेको छ । गच्छदारसँगै जसोतसो राष्ट्रिसभा सदस्य बन्नु भएका जितेन्द्र देव अहिले चुपचाप छन् ।
एकीकरण भएपछि पार्टीमा गच्छदार र देवले मात्र फाइदा लिए अरु नेता तथा कार्यकर्तालाई वास्ता समेत नगरेको भन्दै पार्टीका अन्य नेताहरु आआफ्नो बाटो लाग्न थाल्नु भएको छ । भदौ २८ गते बस्ने कार्यसम्पादनको बैठकबाट लोकतान्त्रिक फोरमलाई समायोजन काँग्रेसमा समायोजना गराउने लगभग तय थियो तर पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अमेरिका भ्रमणमा जानु भएको कारण त्यो पनि स्थगित भएको थियो ।
हुन त वैशाख २१ गते नै समायोजन गर्ने कुरा थियो तर यो समाचार तयार पर्दासम्म लोकतान्त्रिक फोरमलाई काँग्रेसमा समायोजन गरेको छैन । तत्कालिन फोरमका कार्यालय सचिव परमानन्द मेहता भन्नुहुन्छ, पार्टी एकीकरण भएदेखि समायोजनको डेट फिक्स हुन्थ्यो तर हालसम्म भएको छैन । एकीकरण भएपछि आगामी हप्ता, अर्को हप्ता भन्दा भन्दै यत्रो दिन बितिसक्यो अब त लोकतान्त्रिक फोरमका नेताहरु आत्तिन थालेका छन् ।’ रामचन्द्र पौडेल असोज ११ गते अमेरिकाबाट फर्किसक्नु भएको छ तर हालसम्म लोकतान्त्रिक फोरमलाई कही समायोजन गराउने छलफल पनि शुरु भएको छैन । गच्छदार पक्षका एक नेताले भन्नुभयो, रामचन्द्र पौडेल फर्केसक्नु भएको छ तर अब सोह्रश्राद्ध शुरु भएको छ ।
पार्टीका वाहुन नेताहरु थुप्रै छन् उहाँहरु सोह्रश्राद्धमा लागेपछि यो समायोजनतिर कसैको ध्यान जाँदैन । त्यसपछि दशैं शुरु हुन्छ । मंसिरसम्म पर्व तिहार चलिरहने भएका हुनाले यो समायोजन नहुने निश्चित छ ।’ मंसिर ९ गते काँग्रेसको महासमितिको बैठक बस्न गइरहेको छ ।
त्यति बेलासम्म पनि पार्टी समायोजन भएन भने गच्छदार र जितेन्द्र देवबाहेक अरु कोही त्यहाँ बाँकी रहदैन । र, गच्छदार र देवलाई काँग्रेसमा टाँसिरहने बाध्यता पनि हो किनभने उहाँहरु त्यो पार्टीबाट सांसद बन्नुभएको छ । पार्टी छाडेर हिड्यो भने उहाँहरुको सदस्य पद खारेज हुनसक्छ । त्यही भएर उहाँहरु बाध्य भएर बस्नुबाहेक अरु कुनै उपाय छैन ।
नेपाली काँग्रेस पार्टीमा लामोसमय राजनीतिक गरेका विजयकुमार गच्छदार मधेश आन्दोलनपछि २०६४ सालमा मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालमा प्रवेश गर्नुभएको थियो । उहाँ त्यहाँ हुन्जेल पनि सत्ताका खेलाडीका रुपमा चिनिनु भएको थियो । सत्ताकै लागि फोरम नेपाललाई विभाजित गरेर आफ्नै नेतृत्वमा फोरम लोकतान्त्रिक गठन गर्नुभएको थियो । तर उहाँ आफ्ना पार्टीलाई त्यहाँ १० वर्ष पनि टिकाउन सक्नु भएन । नवौं वार्षिक उत्सव मनाएर फेरि उहाँ नेपाली काँग्रेसमै फर्किनु भएको थियो ।
मधेशवादी दलसहितको लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको भए गच्छदार काँग्रेससँग एकीकरण गर्नु हुने थिएन । मधेशवादी दलसहितको गठबन्धन भएको भए गच्छदारलाई पनि चुनाव जित्न सजिलो हुन्थ्यो । तर जब मधेशवादी दल लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट अलग भएर आफ्नै छुट्टै गठबन्धन बनायो, त्यसमा गच्छदार आँतिएर उहाँ काँग्रेसमा विलय हुनुभयो ।
३४४ केन्द्रीय सदस्यसहित गच्छदार काँग्रेस पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको थियो । त्यसमध्ये धेरै नेताहरु भानुराम थारुले गठन गरेको नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीमा फर्किसक्नु भएको छ ।
भानुराम थारु गच्छदारको तत्कालिन पार्टी लोकतान्त्रिक फोरममा प्रवेश गर्नुभएको थियो । तर, जब गच्छदारले लोकतान्त्रिक फोरमलाई काँग्रेससँग मिलाउने निर्णय गर्नुभयो अनि भानुरामले त्यसको प्रतिवाद गर्नुभयो । भानुराम थारुको कुरा गच्छदारले सुन्नुभएन ।
अन्ततः लोकतान्त्रिक फोरम र काँग्रेसबीच एकीकरया भयो । त्यसपछि भानुरामले छुट्टै गर्नुभयो ।
अहिले गच्छदारसँग रहेका नेताहरुका लागि भानुराम थारुका पार्टी ओतलाग्ने ठाउँ भएको छ । मंसिरसम्म एकीकरण नभए धेरै नेता त्यही फर्केर पार्टी बनाउने तयारीमा रहेका छन् ।
यद्यपी नेता गच्छदारले अझै पनि विकल्प खोज्नमा हतार नगर्न आफ्ना नेताहरुलाई आग्रह गरिरहनु भएको छ । तर गच्छदारको त्यो आग्रहलाई नेताहरुले विश्वास गरिरहनु भएको छैन । लोकतान्त्रिक फोरमका तत्कालिन महासचिव भर्तेन्दु मल्लिक भन्छन्, हाम्रा एकवर्ष त्यतिकै खेर गयो । एक वर्षसम्म हामीले केही गर्न पाएनौं । काँग्रेसमा हामीलाई केही भूमिका दिएन । अगामी दिनमा पनि के हुने हो त्यसको ठेगान छैन ।
गच्छदारले आफ्नो पक्षबाट प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा आफूसहित तीनजना र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षमा छजना उम्मेदवार बनाउनु भएको थियो । त्यसमध्ये उहाँ मात्र जित्नु भयो अरु सबै हार्नुभयो । गच्छदारको तर्फबाट प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष उम्मेदवार बन्नु भएका छजनामध्ये एकजना चुमनारायण तवदार मात्र मोरगंबाट जित्नु भएको हो भने अरु पाँचैजना पराजित हुनुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक उम्मेदवारको नामावलीमा दुईजनाको नाम राखिएको थियो । मधेशी कोटामा भर्तेन्दु मल्लिक र थारु कोटामा सुमित्र विश्वासको नाम राखिएको थियो । त्यस्तै, प्रदेशसभाको समानुपातिकमा सातजनाको नाम राखेको थियो ।
तर त्यसमध्ये काँग्रेसले कसैलाई समानुपातिक सदस्य बनाएन ।
मल्लिकले भन्नुहुन्छ, पार्टी एकीकरण हुँदा सातजना समानुपातिकमा दिने सहमति भएको थियो त्यसमध्ये दुईजनाको नाम मात्र हालिएको थियो तर कसैलाई सदस्य बनाएनन् । यो एकीकरण गर्नुको कुनै तुक रहेन अब ।
पार्टी एकीकरण गर्ने समयमा केन्द्रीय समितिमा १५ जना राख्ने सहमति भएको हो तर हालसम्म त्यो पनि कार्यान्वयन नभएको मल्लिकले गुनासो छ । काँग्रेस पार्टीले लोकतान्त्रिक फोरमलाई समायोजन गर्न अनाकानी गरिरहेको बेला गच्छदार पक्षको बैठक बसेको थियो । सानेपास्थित गच्छदारको निवासमा बसेको सो बैठकमा अधिकाँश नेताहरुले काँग्रेसले ठूलो धोका दिएको छ त्यहाँ अब पनि कुरेर बसिरहनु पर्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो ।
तर, गच्छदारले अहिले त्यो बेला भएको छैन, मैले मिलाउँदैछु । लोकतान्त्रिक फोरमलाई अवश्य समायोजन गर्नेछ भनि थामथुम पारेर राख्नुभयो । तर, नेताहरु अझै विश्वस्त हुनसकेको छैन । तत्कालिन लोकतान्त्रिक फोरम नेपालका तत्कालिन महासचिव रामजनम चौधरी भन्नुहुन्छ, काँग्रेसले समायोजन गरेको छैन, एक वर्षदेखि हामी कुरेर बसेका छौं, अहिलेको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ, हेरौं के हुन्छ ।’
विजयकुमार गच्छदारलाई काँग्रेसमा समायोजना गर्न नदिन मुख्य बाधक रामचन्द्र पौडेललाई लिएको छ । रामचन्द्र पौडेल पक्षले गच्छदारलाई त्यतिकै समायोजन गराउने पक्षमा छैन । राजनीतिकका चतुर खेलाडीका रुपमा चिनिएका गच्छदारलाई पार्टीमा समायोजन गर्यो भने शेरबहादुर देउवा अझै बलियो हुन्छ भनि भयले रामचन्द्र पक्षले समायोजन गराउन चाहेको छैन ।
रामचन्द्र पक्षले मात्र होइन, देउवा पक्षले पनि मनैदेखि गच्छदारलाई भित्र्याउन चाहनु भएको छैन । एउटा सिंगै पार्टी चलाउनु भएका गच्छदारको देशैभरि सानो ठूलो संगठन रहेको छ । यसलाई समायोजन गरियो भने यसले पार्टीमा समायोजन गरायो भने गच्छदारलाई पार्टीमा ठाउँमा बनाउन गाह्रो हुनेछैन र पछि सबैलाई अप्ठ्यारोमा पर्नेछ ।
शेरबहादुर देउवापछि विमलेन्द्र निधिले आफूलाई देख्नुभएको छ । देउवापछि आफू सो पार्टीको सभापति बन्ने सपना देख्नु भएका निधिले गच्छदारलाई त्यतिकै स्वीकार गर्नुहुन्न । निधिले कुनै पनि हालतमा गच्छदारलाई सहजरुपमा स्वीकार नगर्ने पार्टीमा चर्चा रहेको छ ।